Koox hubeysan oo Shan Macalin Dugsi Qur'aan ku dilay Shabeellaha Dhexe - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Koox hubeysan oo Shan Macalin Dugsi Qur’aan ku dilay Shabeellaha Dhexe
Wararka naga soo gaaraya degmada Raaga Ceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ay sheegayaan in maleeshiyaad hubeysan ay Shan Macalin Dugsi Quraan ku dileen Tuulada Burdheera ama Koogaar oo qiyaastii 50km u jirta degmadaas.
Maleeshiyaadka hubeysnaa ayaa rasaas ku furay Macalimiinta oo xiligaas sida la sheegay Qur’aan saarayay Haweeney xanuunsaneyd, iyaga oo goobta ka baxsaday.
Guddoomiyaha degmada Cadale ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa Risaala u xaqiijiyay falkaasi, isaga oo sheegay in uu ahaa mid aad looga naxo, in kastoo uusan faah faahin ka bixin sababaha keenay dilka macalimiinta.
1. Sheekh Daahir Xasan Cali Dheere2. Macalin Maxamuud Canbuure
Previous articleIn ka badan 200 oo maxbuus oo ka baxsatay xabsi ay ku xirnaayeen
Next articlePuntland & Jubbaland oo Beesha Caalamka kala hadlay Arrimaha doorashada
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa hoyga uu ka deganyahay Muqdisho ku qaabilay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud...